Zvose Chirungu - Central Language School, Cambridge
Idzi General English ndiyo maawa 15 masikati mangwanani oga anotanga pa 09: 30 uye kupedzisa pa 13: 00 nekafu yekofi pa11: 00.
Isu tinoshandisa mabhuku akasiyana-siyana * mugore rese kubva Elementary kusvika Advanced level. Kune mikana yakawanda yekuti iwe udzidzise kutaura kwako nekuteerera pamwe nemataurirwo ako, mazwi, kuverenga, grammar uye nekunyora. Vhiki yoga yoga vadzidzisi vako vachaisa ruzivo pamusoro pemakirasi pabhodhibhodhi.
Musi weMuvhuro iwe uchaongorora basa kubva vhiki risati yatanga kana kutora mwedzi woga woga unoedzwa. Iwe unogonawo kudzidza mutauro unokosha wakadai seFrasal Verbs kana Daily Expressions Expressions.
Pakupera kwevhiki imwe neimwe une mukana wekuongorora zvidzidzo uye iwe unogona kukumbira kushanda kwegore negore nemumwe wevadzidzisi vako.
Iwe unogonawo kuongorora kudzidzira (kune avo vadzidzi vanotora miedzo yakadai seKET, PET, FCE, CAE, CPE kana IELTS).
Vadzidzi venguva yakazara vakange vadzidza kwemavhiki e2 kana kwenguva yakareba vachagamuchira chiziviso uye mushumo pakuguma kwemudzidzi wavo.
* Hapana mari yekubhadharira mabhuku kunze kwekurasikirwa kana kukuvara.